Xabsiga dhexe ee Xamar oo deeq dawo ah la gaarsiiyay | Radio Muqdisho
Xabsiga dhexe ee Xamar oo deeq dawo ah la gaarsiiyay
Published on December 4, 2012 by admin · 1 Comment · 1,875 views
Wasaaradda hormarinta adeegga Bulshada ayaa deeq dawo ah gaarsiisay Xabsiga dhexe ee Xamar halkaas oo ay ku jiraan maxaabiis.
Deeqdan dawada ah ee ay maanta gaarsiisay waaxda caafimaadka ee wasaaradda adeega bulshada Xabsiga dhexe ayaa isugu jirtay dawooyinka loo isticmaalo fuuq celinta, cudurada maqaarka iyo sidoo kale dawooyin kale, waxaana dhaqaatiirti ka socotay waaxda caafimaadka ay u sameyeen baaritaano maxaabiista.
Taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Xasan Xuseen ayaa ugu mahad celiyayay dadaalka waaxda caafimaadka ay dawada kusoo gaarsiisay maxaabiista isagoona ku tilmamay mid xiligii loo baahnaa yimid.
Dr C/risaaq Yuusuf Maxamuud ku simaha agaasimaha waaxda caafimadka ee wasaaradda arrimaha bulshad oo isna lahadlay saxaafadda ayaa tilmamay in maxaabista ay yihin dad dambi galay balse aysan taa micnaheedu ahayn inay lumiyeen muwaadinintooda ayna mudan yihiin in la siiyo daryeel caafimaad iyo mid nololeed intaba waxaa uuna ka codsaday dhamman hay’adaha samafalka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya caafimaadka in ay lasoo gaaraan xabsiga dhexe ee Xamar kaalmo.
Xabsiga dhexe ee Xamar waxaa ku jira maxaabiis loo haysto dambiyo kala duwan qaarkoodna la xukumay ku waa oo u baahan in lasiiyo daryeel caafimaad iyo mid nololeed.
abi rahman says:	December 4, 2012 at 4:50 pm	ilaahow inti muslim eh oo aan muteysan xabsi xoriyadooda sii meel kasto oo ey dunida ka joogaan Aamiin